आज असोज ४ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
September 20, 2020 2006
घरायसी सुखसु’विधा बढा’उने कुनै महँगो’ वस्तुको किनमेल गर्न मन लालायित हुनेछ । यात्रा लाभप्रद बन्न सक्छ, धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन । दिनभरि मन प्रफुल्ल रहने छ । शान्त र रमाइलो वाता’वरणको सिर्जना हुनेछ । व्यवहारिक र व्य’वसायिक चिन्तनका लागि उपयुक्त समय छ । घरायसी सुखसुविधा र मायाप्रेमका लागि स’मय निकाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
भोलिको लागि शुभअङ्क : ६ र शुभरङ्ग : छिर्के’मिर्के बुट्टे हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ अश्विनीकुमाराभ्यां नमः न्यून’तम जापस’ङ्ख्या : २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
व्यापार÷व्यवसाय मध्यम रहेको छ । ज्ञान र चिन्तन उप’योगी बन्नसक्छ । बौद्धिक र चिन्त’नमूलक क्रियाकलाप दिन बित्नेछ । तर साँझदेखि प्रतिकूल समय सुरु हुनसक्छ । आर्थिक समस्या’ले सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्छ । खर्च बढ्न सक्छ । रिसको का’रणले असर पुर्याउने सम्भा’वना समेत छ । आत्मबल र संयमता गुमाउनु हुँदैन ।
शुभअङ्क : ५ र शुभरङ्ग : हलुका नी’लो वा आकाशे हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ हयग्रीवाय नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
दिनको सुरुवा:तमा आलस्य र थका’नको महसुस भए पनि आनन्द र उल्लासको वातावर’णमा समय व्यतीत हुनेछ । आम्दानी’को नयाँ स्रोत देखा पर्नेछ । डुबेको धन अप्रत्या’शित ढङ्गले फिर्ता आउन सक्छ । परिवा’रका सदस्य’हरूमा खुसी हुनेछ । दिन ढल्दै जाँदा ज्ञान’मूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ । पठनपाठनमा मन जानेछ ।
शुभअङ्क : ४ र शुभरङ्ग : रातो वा पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ अष्टमातृकाभ्यो नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या : ०९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ । दाजुभाइ र बन्धु’वान्धवले सकेको सहयोग गर्नेछन् । कुनै काम’को नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । साँझमा चतुर्थ भावमा चन्द्रमाको प्रवेश हुनेछ, त्यसपछि राम्रो÷नराम्रो दुबैखाले समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ । बेलुका झिना’मसिना घराय’सी सम’स्याहरू देखापर्न सक्छन् । जीवनसाथीसित ठाकठुक पर्ने सम्भावना छ तर तुरुन्त सुलह हुनेछ ।
रोकिएका काम सम्पा’दन हुनेछन् । पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रै लाभ प्राप्त हुनेछ । आम्दानी’का नयाँनयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन् । पारिवा’रिक सुख मिल्नेछ । माता’पिता वा अभिभावकवर्गबाट आवश्य’क सह’योग र सल्लाह प्राप्त हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रबाट सम्मानित हुने अवसर पाइने छ । हाँकेका, ताकेका कुरामा सफलता मिल्नेछ ।
बेलुका:सम्म दाम्पत्य जीवनमा सका:रात्मक सम्बन्ध रहने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट राम्रो प्रतिफ’ल प्राप्त हुने छ । बौ’द्धिक क्षेत्रमा समेत राम्रो छ । गरेका का’ममा ढिलो भए पनि उपलब्धी’मूलक सफलता मिल्नेछ । दिनभरि पारि’वारिक सम्बन्ध सामान्य रूपले अगा’डि वढ्ने छ । महत्वपूर्ण घरा’यसी काम साँझ पर्नुअघि नै सिध्या’उनु राम्रो हुन्छ ।
Prevसीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ को जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस्
Nextहिन्दूहरुको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वतबारे आश्चार्यजनक पाँच रहस्य ! थाहा पाउनुहोस्
लकडाउनमा बिहे गरेर घर फर्कदै गर्दा प्रहरीले रोकेर कारबाहीको सट्टा उल्टै पैसा दिए (भिडियो सहित)